167331 पटक पढिएको
- भीषण न्याैपाने
टेक्सस (अमेरिका) | 2nd Dec 2017, Saturday | २०७४ मंसिर १६, शनिबार १९:२२
बिहानको झिसमिसे अँध्यारोमा भर्खर स्टोर ओपन गरेर आमासँग फोनमा बोल्दै थिएँ । घरको आँगनीमा भैलिनीहरु भट्याईरहेको प्रष्ट सुनियो । तिहार कस्तो लागिरहेको छ त्यतातिर ? आमाले सोध्नुभयो । मैले हाँस्दै जवाफ दिए-'खुब रमाईलो भैरहेको छ ।'
'आज त यता लक्ष्मी पुजा, भर्खरै सेलरोटी पकाएर सक्न लागे । भैलिनीहरु आइरहेका छन्,' आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो । आमाले फोन भैलिनीहरुको नजिक लगेर राखिदिनुभयो ।
उता भैलिनीहरु रमाउँदै थिए । म आफ्नै विगतमा पुगे । यसपालीको यो तिहार अमेरिका आईसके पछिको दोश्रो हो मेरो लागि । अघिल्लो बर्ष 'ईष्ट सेन्ट्रल युनिभर्सिटी' को होस्टेलमा छँदा साथीभाईसँग रमाईलो गर्दै तिहार बित्यो । घरबाट बोकेर ल्याएको पैसा खल्तिमा थियो त्यतिबेला । होस्टेलको खाना छोडेर म्याक डोनल्स र पिज्जा हट गईन्थ्यो । छुट्टै रमाईलो थियो त्यो बर्ष । जब खल्ती शून्य भयो र बाहिर अपार्ट्मेन्टमा बस्न थालियो त्यसपछि सुरु भयो अफिसियल अमेरिका बसाई ।
त्यति बेला कामको खाँचो भयो । साथीभाइसँगको सरसापट र युनिभर्सिटीको जर्नलमा काम गर्दा कमाएको केही हजार डलर जम्मा गरी टोयोटा क्याम्रे किने । गाडी नभएसम्म अमेरिकामा कमाई हुँदैन । काम खोज्न जाँदा पनि पहिलो प्रश्न हुन्छ- गाडी छ कि छैन कामसम्म जाने अउनका लागि ?'
गाडी चढ्ने रहर त छदैँ थियो तर वाध्यता पनि थपियो कामले गर्दा ।लामो खोजपछि टेक्ससको ड्यालासको एउटा 'स्मोक शप्' मा काम मिल्यो । म बस्ने ओक्लाहोमा राज्य, तर काम मिल्यो झण्डै दुइसय माईल टाढाको टेक्ससमा ।
यतातिर मनमा यस्ता तर्कना चल्दैथियो । आमा बोल्नु भयो- 'बाबु सुनिराछौ ?' मैले सुन्दै छु भनेर जबाफ फर्काएँ । उता भैलिनीहरु चर्को स्वरमा भट्टाउदै थिए-
'राम्रो ग्रेडमा ब्याचलर गर्, पैसाको पछि नलाग्' बाबाको यो डाईलग प्राय सुन्नुपर्छ । जे जस्तो होस्, अमेरिकाले जिन्दगी देखाएको छ । कम्तिमा आफ्नै खुट्टामा उभिँन सिकाएको छ । कहिलेकाहिँ काम र पढाईको चापबाट बिश्राम लिँदै साथीभाईसँग घुम्न निस्किदा थकित हाँसो देखाउँदै फेसबुकको भित्तामा कसरी रङिन पार्ने सिकाएको छ ।
रायोको सागमा भिटामिन–ए प्रशस्त पाइने भएकाले यसले रतन्धोलगायत रोगबाट केटाकेटीलाई बचाउँछ । रुघा लागेमा रायोको दाना पिसेर यसलाई महमा मिसाई सुँघ्नाले सञ्चो हुन्छ ...
बाँदरमुढे घटनामा प्रचण्डको चुनावी रणनीति
२०७४ मंसिर १७, आईतवार ०४:४५